Stockholm - Krisinformation.se
Ka ilaali inaad ka qeybqaadato, tusaale ahaan shirarka, riwaayadaha, bandhigyada, tabobarada, kulamada iyo tartamada isboortiga. Laakiin taasi ma khuseyso tabobarada isboortiga ee carruurta iyo dhalinyarada dhalatay 2005 ama wixii ka danbeeyey.
Haddii ay suurtogal tahay iska ilaali inaad xiriir jidhka/taabasho jir ahaaneed la yeelato dadka kale aan ahayn kuwa aad la nooshahay. Waxa uu taas micnaheedu yahay waxa ka mid ah in lagaala talinaayo inaad qabanqaabisid ama ka qeybqaadatid xaflad ama kulamada kale ee bulshada.
Xiriirada dhowdhow ee daruuriga ah, sida tusaale ahaan booqashooyinka daryeelka caafimaadka iyo baaritaanka caafimaadka, ayaan ku jirin talooyinka la soo jeedinaayo. Waxaase mihiim ah in laga fikiro in qof calaamado laga yaabo inay yahay covid-19 leh uu ka fogaadaa dhamaan xiriir dhow ee dadka kale oo dhan.
Go'aanka waxa sidoo kale ku jira talo bixinta guud ee laga sii adkeeyay ee la xiriirata waxqabadyada- sida dukaamada, xarumaha ganacsiga iyo goobaha isboortiga - iyo goobaha shaqada ee gobollada Stockholm, Västra Götaland iyo Östergötland. Waxqabadyada iyo loo shaqeeyayaashu waa inay qaadaan talaabooyin lagu hubinayo in soo booqdayaasha iyo shaqaaluhu ay raaci karaan tilmaamaha guud ee marka meel degaanka uu ka dillaac covid-19.
Uppdaterades 25 nov 2020 15:21